Iiraan oo noqotey wadankii labaad ee caaga la hago qaliin u isticmaasha - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Iiraan oo noqotey wadankii labaad ee caaga la hago qaliin u isticmaasha
Ayadoo aaladaha la hago sida diyaaradaha iyo kuwa afka-qalaad lagu yiraa Robot oo ah caag la hago uu ku soo badanayo wadamada gaalada oo tirada dhalinyaradu aad hoos ugu dhacday, ayaa Iiraan noqotey dalkii labaad ee aduunka ee caaga la hago u isticmaasha qaliinka.
Caagan afka qalaad lagu yiraa robot ayaa warshado badan oo aduunka ah ugu shaqeeya si hufnaan ah siiba warshadaha soo saara gawaadhida iyo kuwa kale ee waaweyn sida diyaaradaha.
Waxana aduunka kow ka ah Maraykanka oo khuburada korontadu si aada u isticmaalaan. Haddaba Iiraan oo Maraykanka iyo reer galbeedku cunaqabatayn xoogan ku hayaan ayaa haddana noqotey dalkii labaad ee caagaas u isticmaasha qaliinka.
”Caagan ayaa laga hagayaa meel fog umana baahna in qofku dul joogo ayuu yiri khuburo Iiraaniyiina oo iyagu wax ka og shaqada caagan la hago. Waxa durtaba caagan ka heshay Indooniisiya oo iyadu soo dalbatey isla markaana ka furaysa dalkeeda xarun lagu sameeyo laguna tababarto.